विचार/विमर्श – Page2– Health Post Nepal
यतिबेला हामी अत्यन्त असहज परिस्थितिमा छौं। मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने यो असाधारण क्षणमा विश्वसमुदाय एकजुट बनेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ लड्नु छ। विश्व नै एकातिर एकढिक्का बनेर लड्नुपर्ने क्षणमा हामी देशवासीहरू एकजुट रहनु झन् जरुरी छ। चीनको उहान प्रान्तबाट...
पछिल्लो समय सीमा नियमन विषयले इतिहासमै सबैभन्दा बढी राजनीतिक स्तरको महत्व पाएर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र सामर्थ्य देखापरेन। यसमा नेपालको भन्दा भारतकै बढी चासो र सक्रियता चाहिनेमा दुईमत छैन। भारतले चाहन्छ वा चाहँदैन भन्नेसम्मको यथार्थ बुझाइमा पुग्न...
र्‍यापिड टेस्ट र पिसिआर नतिजा फरक आउन सक्छ किन ?
‘कोभिड-१९’ पोजेटिभ छ वा छैन भनेर विश्वले नै परीक्षण गर्ने वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड विधि भनेको पिसिआर परीक्षण विधि हो । यसमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको रियल टाइम, पोलियमरेक्स र चेन रियाक्सन हो । यस विधिमा जुन नमुना हामीले संलग्न गर्छौं,...
तपाईंलाई कति मजाले बोल्न आउँछ। बोल्दाबोल्दै के बोलिरहेका हुँला भनेर दिक्क लाग्छ कि लाग्दैन? आफ्नो बोलीको औचित्यबारे कहिलेकाहीँ समीक्षा गर्नहुन्छ? म यहाँ तपाईंलाई कम बोल्नोस् भनेर उपदेश दिन खोजिरहेको छैन। नबोली संसार चल्दैन, सिन्को भाँचिदैन। तर, बोलीको मतलब र...
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)को कारण नेपाल पनि ठूलो जोखिम बोकेको राष्ट्र हो । हालसम्म नेपालमा ६ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । सरकारले हालसम्म १ हजार ३ सय ५६ जनाको नमुना परीक्षण गरेको छ...
अन्ततः सरकार कोरोना रोकथाम–नियन्त्रण सामग्री खरिदका लागि समेत सेनाकै शरण परेको छ। व्यापक जनधनको नोक्सानी पुर्‍याउन सक्ने कोरोना महामारी रोकथाम–नियन्त्रण निम्ति दुरदर्शी र पारदर्शी भएर काम गर्ने पर्याप्त समय छँदाछँदै प्रष्टतः भ्रष्टाचारको आशयले खरिद गर्न खोज्दा अकल्पनीय रूपले लोकप्रियता...
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण तथा उपचार सामग्री खरिद ठेक्का काण्ड उठानदेखि अन्त्यसम्मको सरकारी रवैयाबाट सभ्य समाजलाई सबै हिसाबले घाइते पार्ने विषरस निस्केका छन्, अझै निस्केलान्। र, ती कोभिड–१९ जस्तै विनाशकारी छन्। समाज नैतिकता, अनुशासन र निष्ठामा चल्नुपर्छ भन्ने धारणाको...
सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्त्यतिर चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड १९को संक्रमणबाट ३८ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु ८ लाख हाराहारीमा संक्रमित भइसकेका छन्। एकातिर रोगको संक्रमण दिन दुई गुणा र रात चौगुनाको दरमा फैलिरहेको छ...
समयले जेठ महिना २०७७ मा टेकेको छ। एउटा सुक्ष्म भाइरसले विश्वलाई जिस्काइरहेको छ। कतै तड्पाइरहेको छ । कतै आजित बनाएको छ। कतै भने छोड्ने क्रममा छ । कोभिड-१९ नामक त्यो भाइरस विश्व भ्रमणमा निस्किएर नेपालमा पनि प्रवेश गरेको पनि...